တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Song Tao အား လက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Song Tao အား ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိဇေယျာသီရိဗိမာန်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့်တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong Liang ၊ စစ်သံမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာ-တရုတ်နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတိုးမြှင့်ရေးနှင့် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် တပ်မတော်မှဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများနှင့် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော ဒေသတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများက အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက် ခဲ့မှုများအား အစိုးရနှင့်တပ်မတော်မှ ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများအပေါ် နိုင်ငံတကာမှ အမှန်အတိုင်းမသိရှိဘဲ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်စွပ်စွဲပြောဆိုနေမှုကိစ္စရပ်များနှင့် တရုတ်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ ရပ်တည်ဆောင်ရွက်ပေးနေမှုအခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် တရုတ်နိုင်ငံမှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည့် အခြေအနေများနှင့် နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား အဆင့်အလိုက် ချစ်ကြည်ရေးခရီးများ အပြန်အလှန်လည်ပတ် ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံ၊ ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးတို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင် ပစ္စည်းများအပြန်အလှန်ပေးအပ်ကြပြီး တက်ရောက်လာကြသူများနှင့်အတူ စုပေါင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ ကှနျမွူနဈပါတီ၊ နိုငျငံတကာဆကျဆံရေးဝနျကွီး H.E. Mr. Song Tao အား ယနမှေ့နျးလှဲပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိဇယြောသီရိဗိမာနျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ညှိနှိုငျးကှပျကဲရေးမှူး (ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မွထှနျးဦး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး တရုတျပွညျသူ့ သမ်မတနိုငျငံ၊ ကှနျမွူနဈပါတီ၊ နိုငျငံတကာဆကျဆံရေးဝနျကွီးနှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Hong Liang ၊ စဈသံမှူးနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ မွနျမာ-တရုတျနှဈနိုငျငံခဈြကွညျရငျးနှီးမှုတိုးမွှငျ့ရေးနှငျ့ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုတိုးမွှငျ့ရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြား၊ မွနျမာနိုငျငံ၏ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျမြားတှငျ တပျမတျောမှဆောငျရှကျနမှေု အခွအေနမြေားနှငျ့ နှဈနိုငျငံနယျစပျဒသေတညျငွိမျအေးခမျြးရေးအတှကျပူးပေါငျး ဆောငျရှကျရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြား၊ ရခိုငျပွညျနယျမွောကျပိုငျး ဘူးသီးတောငျ၊ မောငျတော ဒသေတှငျဖွဈပှားခဲ့သညျ့ ဘင်ျဂါလီအကွမျးဖကျသမားမြားက အကွမျးဖကျတိုကျခိုကျ ခဲ့မှုမြားအား အစိုးရနှငျ့တပျမတျောမှ ဥပဒနှေငျ့အညီဆောငျရှကျခဲ့မှုမြားအပျေါ နိုငျငံတကာမှ အမှနျအတိုငျးမသိရှိဘဲ မွနျမာနိုငျငံအပျေါစှပျစှဲပွောဆိုနမှေုကိစ်စရပျမြားနှငျ့ တရုတျနိုငျငံက မွနျမာနိုငျငံဘကျမှ ရပျတညျဆောငျရှကျပေးနမှေုအခွအေနမြေား၊ ရခိုငျပွညျနယျဖှံ့ဖွိုး တိုးတကျရေးအတှကျ တရုတျနိုငျငံမှ ကူညီဆောငျရှကျပေးမညျ့ အခွအေနမြေားနှငျ့ နှဈနိုငျငံ တပျမတျောနှဈရပျအကွား အဆငျ့အလိုကျ ခဈြကွညျရေးခရီးမြား အပွနျအလှနျလညျပတျ ရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတ နိုငျငံ၊ ကှနျမွူနဈပါတီ၊ နိုငျငံတကာဆကျဆံရေးဝနျကွီးတို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျ ပစ်စညျးမြားအပွနျအလှနျပေးအပျကွပွီး တကျရောကျလာကွသူမြားနှငျ့အတူ စုပေါငျး ဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။